iPhone Video Editor: Si fudud Edit iPhone Video ku saabsan PC
> Resource > Video > Sida loo Edit iPhone (iPhone 5 / 5c / 5s) Video ku saabsan PC
Toogteen qaar ka mid ah videos kalifaya oo aad iPhone, iyo waxay rabaan inay wada dhejiya si ay u abuuraan video cusub? Haddii aad weligaa saxar video qaar ka mid ah barnaamijyadooda iPhone tafatir sida Splice, iMovie, ama wax kasta oo ka hor, waxaad ogaan lahaa sida daran waxay noqon kartaa in la sameeyo hawlaha fudud. Sidoo kale, barnaamijyadooda telefoonka caadiga ah aad u hesho muuqaalada aad u yar, taas oo laga yaabaa in aan ka dhergin baahidaada. Tan waa wax yar waalan si toos ah aad iPhone xaalkaa, aan aragno waxa codsiga desktop ah kuu sameyn karo: Video editor Wondershare ( Video editor u Mac ). Waa degdeg ah, xiiso leh, oo awood iPhone video editor u PC in si deg deg ah noqon kartaa videos galay filimada xirfad-raadinta iyo iyaga si toos ah u geliyaan in YouTube. Hoos waxaan ku soo bandhigi doonaa qaar ka mid ah sifooyinka ugu muhiimsan.
Xoog Desktop iPhone Video Editor:
Si fudud jar, isku shaandheyn, dalagga, ku milmaan iyo isu iPhone video files;
Ku dar qoraalka, filter, Intro / credits cajiib ah iyo saameynta kala guurka si loo kobciyo iPhone video files;
Bixi saamaynta sare sida Janjeeri-wareeg, Muuse, Jump jarid, Face-off, iyo qaar kale;
Geliyaan ku saxar iPhone videos gal Facebook iyo YouTube, gubi in DVD ama badbaadin qaabab kale.
Maxaad Dooro iPhone Wondershare Video Editor
Barnaamijkan wuxuu la iman interface horyalka Talyaaniga oo si sahlan loo isticmaalo kuu oggolaanaysa in aad xaalkaa iPhone video si hufan. Ma qaadan doontaa waqti badan in aad loo isticmaalo, waxa uu.
Edit & In kor loo qaado Videos
Iyada oo dhammaan qalabka tafatirka video anfacaya, aad si fudud u samayn kartaa filim qurux badan oo ka mid sawiro iyo videos caadi toogtay aad iPhone (iPhone 4s / 5 / 5C / 5S ka mid ah).
Saamaynta muuqaal Fantastic
Tani video editor iPhone kuu ogolaanaysaa inaad si fudud aad video iPhone hufan oo aqoon leh iyadoo la siinayo 300+ cabsi badan kala guurka, koobab iyo saamaynta.
Share videos meel kasta
Marka video tafatirka waxaa loo sameeyaa, badbaadin video inay qaab socon u playbacking labada kombuyuutarrada gacanta computer iyo, waxay si toos ah u geliyaan si online ah ama gubi in DVD.
c Sida loo Edit iPhone Videos on PC:
1. goo ama kala qaybsan ah iPhone video clip
Haddii aad rabto in aad jar video in dhererka cayimay, riix video clip ah, mouse ka badan ay ku laayeen midig ama bidix si ay u muujiyaan "ayuu fallaadh double" tilmaame, ka dibna u jiidin dhererka kasta oo aad rabtid.
Si aad u kala jabeen video clip ah, waxaad u baahan tahay in ay doorasho adigoo gujinaya, jiidi sare ee cas Time Tusiyaha in meel kasta oo aad rabto, ka dibna riix "maqas" button.
2. Dalagyada, isku shaandheyn iyo beddelo video / goobaha audio
Xaqa riix file video iPhone on waqtiga inay soo qaadaan muuqaalka iyo guddi tafatirka audio. Halkan, waxaad isku shaandheyn karaa ama video dalagga, qabsato dhalaalka, saturation, bedelkeeda, gaabis ah ama dadajiso xawaaraha ciyaartoyda, garoonka audio dhigay, mugga, libdhi gudaha / dibedda, iyo in ka badan.
3. Taabo aad video music, qoraalka, Intro / credit iyo in ka badan
Music Background dari doonaa taabasho aad u fiican in aad video. Waxaad jiidi karaan jeedi music ah laga keeno si ay ula socdaan music ah, taasina waxay ka dhigi doonaa inuu u ciyaaro music video ay weheliyaan aad la. Waxa kale oo aad ku dari kartaa erayada si ay u sharxaan ficilka, ama si fudud u tilmaan wax xiiso leh. Si tan loo sameeyo, kaliya riix "Text" button in bar qalabka, jiididda-n-hoos u saamayn qoraalka si ay ula socdaan qoraalka ah iyo soo galaan erayadaada. Music iyo qoraallada ka sokow, si xor ah u dari Intro / credits iyo saameynta kala guurka by guji isha ku xusan jadwalka.
4. Ku dar Muuse, Jump Goo, Janjeeri-Shift, iyo Face-off
Haddii loo baahdo, xaq guji iyo dooran "Power Tool" ama si toos ah riix "Power Tool" button kor ku xusan waqtiga si aad u dalbato saamaynta badan oo horumarsan sida-up Close, Jump Goo, Janjeeri-Shift, Muuse, iyo Face-off aad footage.
Video Tutorial: Sida loo Edit iPhone Videos on PC
Sida loo Laablaab iPhone Videos
Sida loo soo biir Video Files
Top 5 Free Cinwaan Editor Tools for Your Video Faalladaada
Sida loo sameeyo gaabis / Fast Motion Videos